सहकारीले ऋण मात्र हैन ऋणलाई सदुपयोग गर्न परानर्श पनि दिनु पर्छ - Saptakoshionline
सहकारीले ऋण मात्र हैन ऋणलाई सदुपयोग गर्न परानर्श पनि दिनु पर्छ
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आश्विन ११, २०७५ समय: १:५८:३५
बिष्ट संगम बिष्ट/ चतरा नेपालका वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले अती बिपन पतिवारको जिवन स्तरलाई उकार्न ऋणसंगै ऋणलाई सहि सदुपयोग गर्न ऋणको कारोवार गर्ने परिवारलाई सहकारीले परापर्श समेत दिनु पर्ने सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालीका वडा नं २ चतरामा रहेको अौलिया बाबा वचत तथा ऋण सहकारी सस्थाका अध्यक्ष रमेश कुमार बिष्टले वताउनु भएको छ । सहकारीले गरि रहेका काम , सम्भवना र चुनौतीका बिषयमा कुरा गर्दै सो कुरा वताउनु भएको हो । गाऊ गाऊमा सहकारी,घर-घरमा रोजगारी भन्ने मुल मन्त्र बनाएर छरिएर रहेको रकमलाई एकिकृत पुजी निर्माण गरि सहकारीहरुले काम गरि रहेका छन् । मेलमिलाप, सहकार्य र निकट सम्बन्धको अभ्यासले नेपालमा सहकारीको स्वरुप सिर्जना गरि रहेको छ । सन् १८४४ मा बेलायतका मजदुरहरुले उपभोक्ता सहकारी स्थापना गरि सामुहिक लाभका आदारित ब्यवसार्यको स्थापना हरेका थिए ।
सन् १८४४ बेलायतमा उदय भएको सहकारी नेपालमा भने बि.सं. २०१३ सालमा चितवनमा वखान सहकारी संस्थापना पछि नेपालमा पनि सहकारी संस्थापना भएको थियो । जस अनुशार वखान सहकारी स्थापना पछि सहकारी अभियान सुरु भएको पाईन्छ । जसको फल स्वरुप बि.सं.२०४८ सालबाट सहकारी अभियानले फड्को पार्न सफल भएको थियो । विशेष गरि समाजमा गरिने ब्यवसाय नै हो सहकारी जस्ले न्यून आय भएका परिवारको हितमा काम गर्ने गर्दछ । वचन गर्ने बानिको बिकास र उत्पादशिल काममा लगानी गर्नु नै सहकारीको मुल उदेश्य हो ।तर पनि सहकारीहरु सहकारी सिद्बान्त मूल्य मान्य मान्यतामा अगाडी बढ्न सकेको छैन । यता कुनै कुनै सहकारी सहकारीको मूल्य र मान्यता भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने गरेको घट्नाले सहकारीको प्रभावकारितालाई नै कम्जोर पार्न खोजेको देखिन्छ । गरिवि निर्मुल पार्न सहकारीको भुमिका र बजारमा छरिएर रहेको रकमलाई एृकिकृत गर्न स्थापना भएका सहकरीको सुचिमा वराहक्षेत्र नगरपालीकाको चतरामा स्थापना भएको अौलिया बाबा सहकारी पनि एक हो । बि.सं. २०६६ सालमा स्थापना भएको सहकारीमा वराहक्षेत्र १ र २ नंम्वर वडाका ४ सय ५० जना बचत कर्ता छन् ।९ जनाको सन्चाल समिति,३-३जानको ,ऋण , लेखा , शिक्षा समिति ५ जना समाजका प्रतिष्टित ब्याक्तिहरुलाई सल्लाहकार समितिमा र २ जना कर्मचारी राखेर काम गरि रहेको सहकारीले बार्षिक १ करोड ५० लाख हाराहारिमा आर्थिक कारोवार गर्ने गरेको छ । बचत संकल्न सगै बिना धोतो १ लाख ५० हजार र धितो हेरेर ६ लाख सम्म एक जनालाई ऋण लगाई रहेको छ सहकारी पछिल्लो समय चतराको शुख र दुखको साथी समेत बनी रहेको छ । ०६६ सालमा स्थापना भएको सहकारिका बर्तमान अध्यक्ष हुन रमेश कुमार बिष्ट । ३ बर्षे १ कार्यकाल अध्यक्ष पदमा रहि काम गरेका बिष्टको यो दोस्रो कार्यकाल हो जुन दोस्रो बर्षमा पुगेको छ ।
आर्थिक कारोवारमा संबेदशिल चरित्रका बिष्ट सहकारीको माध्यम बाट न्युन आय भएका परिवारको आर्थिक बृद्बि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बिश्बत छन् ।एक सहकारीबाट ऋण लिएका मानिसहरुलाई अर्को सहकारीले ऋण नदिनु पर्ने मान्यताका बिष्ट यदि कसैलाइ सहकरिले ऋण दिदै छ भने ऋणसंगै परामर्श पनि दिनु पर्ने बताउछन् । ऋण दिनु मात्र सहकारीको धर्म हैन ऋणलाई उत्पादन मुलक काममा पनि सहकारीले काम गर्नु पर्ने बिष्टको धारणा छ । सहकारीको चौनौती कस्ता मान्छेलाई ऋण दिने हो र ऋण दिए पछि रकमले के गर्दै छ समेत हेरेर ऋण दिनु पर्छ । अनेकौ योजनामा स्थापन भएका ऋण दिने संस्था स्थानियको पुजिलाई बाहिर लगि रहेका छन । सहकारी भनेको सहकारमा सन्चालन हुने भएकाले संन्चालक ,सल्लाहकार समिति र वचत तथा ऋण लहानि कर्ता बिच सहकार्य हुनु पर्ने बिष्टको बुझाई छ । बिष्ट भन्छ अहिले समाजमा झौले सहकारी संस्थाले सताएको छ। सहकारीको भावि योजना सहकारीले वचत र ऋण मात्रको कार्य नगरी अब उत्पादशिल काम गर्ने छ ।युवा स्वरोजगार, कृषि, प्रयटन र उद्योगमा समेत सहकारीले लगानि गर्ने योजना बनाएको अध्यक्ष बिष्ट बताउछन् । समाजलाई टेवा पुग्ने काम , अती बिपन परिवारका बिद्यार्थीहरुलाई छात्रा वृती, स्बस्थ्य सेवा जस्ता काम गर्ने योजना छ । सनाज, सेयर सदस्य र बचत कर्तालाई कुनै गार्हो सारो परे सहयोग समेत गरि रहेको छ । सेयर सदस्यलाई उचित प्रतिफल उदेश्य बोकेर बार्षिक कार्यक्रम गरि उत्पादन मुखि काम गर्ने योजना सहकारीको रहेको बिष्ट बताउछन्। प्रत्यक बर्ष सहकारीले गर्ने अवलोक भम्रणबाट नयाँ र रचनात्मक कुरा सिकेर सहकारीमा लागु गर्नु पर्ने बिष्टको बुझाई छ ।एकका लागि सबै र सबैकालागि एक भन्ने मुल मान्यता बोकेर सहकरी अगाडी बढेको अध्यक्ष बिष्ट बताउछन् ।
चीनमा ६ रेक्टरको भूकम्प, ११ को मृत्यु, १२२ घाइते
चीनको सिचुआन प्रान्तमा गएको भूकम्पमा परी ११ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ सय २२ जना घाइते भएका छन् । चीनको भूकम्प मापन केन्...
मलेसियामा आयोजना हुने एक सांगीतिक कार्यक्रमका लागि मलेसिया पुगेका ३ जना कलाकारसहित ३२ जना नेपाली पक्राउ परेका छन्। मलेसि...
उद्योग बाणिज्य संघ इटहरीमा शैलेष विष्ट को नेतृत्व किन ?
२०३२ सालमा जन्मभई व्यावसायिक पृष्ठभुमी मात्र नभई सामाजिक कृयाकलापमा १५बर्ष देखीनै सकृय शैलेष विष्ट गएको तीन कार्यकालमा न...
उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको चुनाव आउन अब २ महिना पनि बाँकी छैन । चुनावको मिति नजिकिएसँगै चुनावी चहल–पहल बढ्दै गएको छ । हि...
कालो र सेतो छुट्याउने बेला आएको छ – शैलेश विष्ट
उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको चुनाव आउन अझै करिव २ महिना जति बाँकी छ । चुनाव आउन यतिका समय बाँकी रहेपनि इटहरीमा बैशाखे गर्म...